မင်းရဲ့အနုပညာဖန်တီးသူ David Bridburg
အတိုချုပ်ပြောရရင် Postmodernism ဆိုတာအတိတ်နဲ့ပစ္စုပ္ပန်ကိုပေါင်းစပ်ထားတာပါ။ ငါ့စိတ်ကူးဟာအမြင်အာရုံရောအယူအဆပါ။
အမြင်အာရုံအနုပညာတွင်ပါ ၀ င်သူများသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအနုပညာလက်ရာများကိုရှာဖွေရန်မစ်ရှင်တွင်ရှိနေသည်။ မျှော်လင့်ပါတယ်၊
ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံများသည်အမေရိကန်မူပိုင်ခွင့်ရုံးတွင်မှတ်ပုံတင်ထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်အလုပ်သည် Public Domain တွင်မရှိပါ
အနုပညာရှင်တစ် ဦး ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ငါ့ကိုကြေငြာပါရစေ၊ ကျွန်တော့်မှာစစ်ဆေးပြုပြင်ခြင်းပြproblemနာ၊ မွေးရာပါချို့ယွင်းချက်တစ်ခုရှိတယ်။ ဒီရောဂါကကျွန်တော်အသက် ၂၈ နှစ်မပြည့်သေးခင်အထိရောဂါမပြခဲ့ပါဘူး။
၁၉၈၁ ခုနှစ်မှာ၊ အင်ဂျင်နီယာပညာလေ့လာဖို့ဟူစတန်တက္ကသိုလ်အတွက်ဘလွန်းဖီးလ်အထက်တန်းကျောင်း၊ ငါအိမ်ပြန်လာပြီးလေ့လာဖို့အခက်တွေ့နေတယ်။ အသက် ၂၀ အရွယ်တွင်အိမ်သို့ရောက်သော် UCONN မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်စတင်လမ်းလျှောက်ခဲ့သည်။
ကောလိပ်တက်ပြီးတဲ့နောက်စီးပွားရေးသမားဖြစ်ချင်တယ်။ အစဉ်အမြဲရှိနေသောအနုပညာအတွေးအခေါ်များ၊ ပုံဆောငျ၊ အခြားလိုင်းများတလျှောက်တစ်ခုခုကိုဖန်တီးခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ခေါ်ဆိုမှုဖြစ်သည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ၊ ငါဟာပန်းချီကားဟောင်းတစ်ခုကိုပုံဆွဲပြီးကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုပြီးနောက်ပန်းချီကားထဲကိုထည့်သွင်းဖို့စိတ်ကူးရှိခဲ့တယ်။ အကယ်၍သာ ကျွန်ုပ်သာဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါကဇာတ်လမ်းပြီးဆုံးလိမ့်မည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လေ့လာပြီး Photoshop ကိုကိုယ်တိုင်သင်ခဲ့တယ်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ရောက်တော့ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုသွားဖို့အကြံဥာဏ်တွေရခဲ့တယ်။ ဒီဂျစ်တယ်နည်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အားမက်ခရိုနှင့်မိုက်ခရိုအဆင့်များတွင်စိတ္တဇဆန်ဆန်နည်းလမ်းအသစ်များကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
ငါ့အနုပညာ Postmodernism ဖြစ်ပါတယ်။ Post Modern Art ပန်းချီကား၏အနုပညာပြပွဲသည်အနုပညာနယ်ပယ်၌အရာရာပြီးမြောက်သွားပြီဖြစ်သည်။ ဝိရောဓိအရ, ငါ့ Postmodernism ဗေဒပရိသတ်ကိုအသစ်ဖြစ်ကြသည်။
FineArtAmerica ကော်ပိုရေးရှင်း, အချိန်မီလုံခြုံကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ရေကြောင်း။ ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များအားအကောင်းဆုံးစျေးဝယ်အတွေ့အကြုံကိုယူဆောင်လာခြင်း Bridburg.com.
အမှာစာအားလုံးကို Pixels / FineArtAmerica ကော်ပိုရေးရှင်းက၎င်းတို့နှင့်အတူဆောင်ရွက်သည် စိတ်ကျေနပ်မှုအာမခံ (ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းဆိုင်ရာမူဝါဒ)။ သင်၏အမှာစာနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းလိုပါကဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု (အော်ဒါနံပါတ်ကိုကိုးကားခြင်း) ၂၄ နာရီ / တစ်ရက် ၇ ရက် (အပတ်) တွင်ခေါ်ဆိုပါ။ ယူအက်စ်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဌာနသို့ဖုန်းခေါ်ဆိုပါက (၈၇၇) ၈၀၇-၅၉၀၁ ။ ယူကေသုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုဖုန်းနံပါတ် 24-7-877 သို့ခေါ်ဆိုပါ။ Pixels ကော်ပိုရေးရှင်းကို Santa Monica, CA. တွင်အခြေစိုက်သည်။
မေးခွန်းတစ်ခု - သင်သည်မူလအနုပညာရှင်တစ် ဦး ကိုရှာဖွေရန်တာ ၀ န်ရှိသလား။ အလွန်ထူးခြားသောအနုပညာလက်ရာများဖြစ်စေသည်အဘယ်အရာကိုစူးစမ်းပါ။